Berlin Makore makumi matatu mushure mekudonha kwemadziro. Uye dzimwe nyaya kubva kuguta guru reGerman | Zvazvino Zvinyorwa
Berlin Makore makumi matatu mushure mekudonha kwemadziro. Uye dzimwe nyaya kubva kuguta guru reGerman
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Zadziswa izvozvi Makore makumi matatu mushure mekudonha kweRusvingo rweBerlin, chiratidzo chekupedzisira cheCold War pakati pezvikamu zvakapatsanurwa mushure mekupera kwechipiri Hondo Yenyika. Nhasi ndinounza hafu yegumi nembiri mazita pamusoro peguta guru reGerman, makore mazhinji akapatsanurwa nemadziro iwayo, uye nhasi mumwe weanonyanya kusimba uye epamberi pasi. Vari nyaya dzakasiyana panguva dzakasiyana yeiyo inogara ichitora Berlin. Kubva nhoroondo dzenhoroondo kune zvekare zvekare zve nhema nhema. Ngationei.
1 Berlin Kuwa: 1945 - Antony Beevor
2 Kuwa kweRusvingo rweBerlin - Ricardo Martín de la Guardia
3 Kuseri kwemadziro - Roberto Ampuero
4 Zvese zvakanakisa - César Pérez Gellida
5 Mumvuri pamusoro peBerlin - Volker Kutscher
6 Kurume Violets - Philip Kerr
Berlin Kuwa: 1945 - Antony Beevor
Hapana chekunzwisisa Berlin chakakamurwa nemadziro icho kupfuura kuenda mavambo echikonzero chako, paHondo Yenyika Yechipiri uye mabhuroko maviri ehegemonic ayo akaguma mukuguma. Uye Antony Beevor ndemumwe wevanyori vezvakaitika kare vanoziva zvakanyanya kuzvitaura. Mubhuku rino iye anovakwazve yekupedzisira huru european hondo yekukonana iyo yaifungidzira kukundwa nekudonha kweTatu Reich.
Naiye magwaro akasimba uye mamwe epic uye zvematongerwo enyika mutoro, Beevor inotsanangura zvese kuomarara kweiyo hombe mashandiro emauto uye zvisarudzo zvevakuru vavo vakaita se manzwiro evarwi rakabatwa muguta rakapotsa raparadzwa zvachose.
Kuwa kwerusvingo rweBerlin - Ricardo Martín de la Guardia
Martin de la Guardia ari Purofesa weChinyorwa Chemazuva Ano kubva kuYunivhesiti yeValladolid uye pano, nehunyanzvi hukuru uye hunyanzvi hwekuongorora, anotiudza izvo zviitiko zvekupedzisira iyo yakaratidza mugumo weGerman kubvira pakakundwa kwayo muhondo. Zvekuti sei Berlin, nemadziro iwayo akavakwa muna 1961, yakava iyo chiratidzo cheEurope chakakamurwawo.
Kuseri kwemadziro - Roberto Ampuero
Uyu munyori weChilean anorondedzera mune ino nhoroondo yekumashure disenchanted uye mumunhu wekutanga makore aakararama mu German Democratic Republic, akasvika kupi mushure tiza hudzvanyiriri hweChile apo aive nhengo yeCommunist Youth yeiyo nyika. Ikoko akawana iyo kubatana kwehurumende yemakomunisti, asi zvakare ne inodzvinyirira system, zveupfumi uye zvetsika kumashure, uye kuti yakangokwanisa kugara netsoka nekuda kwenyika yemapurisa nemauto eSoviet.
Shuwiro yakanakisa - Cesar Pérez Gellida
Tiri kuenda Cold War neinovhero nerunyorwa rwekunyora rwatove kubva munyika yedu saPererez Gellida. Mubhuku rino anotiudza nyaya ya Viktor Lavrov, wechidiki tarenda kubva kuKGB yakamira muBerlin panguva ino. Ikoko anogamuchira basa rakaomarara iro rinoyedza ruzivo rwake rwepfungwa psychology uye tarenda rake seanoshanda mumiriri. Asi ichayambuka naye kuedza kwemukuru wevatariri veKriminalpolizei, Otto Bauer, kugadzirisa kufa kwacho yevana vashanu vanoita kunge vane hukama kune mumwe nemumwe uye kuti zviremera zveGDR havadi kuziva.
Mumvuri pamusoro peBerlin - Volker Kutscher
Uye neano akateedzana kubva Kutscher uye anotevera kubva Kerr Isu tinoenda kune yekutanga Berlin, iyo kubva kuma30s, apo izvo zvaizoitika nguva pfupi yapfuura zvainge zvisati zvatarisira, asi rima rakanga ratove pedyo munhoroondo yeGerman. Iri zita remunyori wechiGerman uye mutori wenhau Volker Kutscher ndiye wekutanga anotarisa mutikitivha wake Gereon rath, komishina wechidiki anobva kuCologne.
Rath anotumirwa kuBerlin kunoshanda mubazi rezvemhombwe. Asi iwe uchazobatwa mune iyo kesi nemukana yekufa kwemugari weRussia. Kuferefetwa kwake kunomutungamira munzvimbo ine ngozi zvikuru inosanganisira maSoviet, goridhe rakakura, uye kunyangwe vanhu vakamukomberedza.
Kurume violets - Firipi Kerr
Uye isu tinopedzisira tave pamwe iyo inonyanyo kuzivikanwa mhosva yekuteedzana inoiswa muBerlin, uya wemunyori weScotland Firipi Kerr, akashaya gore rapfuura, uye wake kupfuura ane mukurumbira Bernie pfuti. Iri ndiro zita rekutanga trilogy, Berlin Noir, ane chiito chiri mu 1936, apo Olimpiki yave kuda kutanga. Gunther, aimbova mupurisa uye private mutikitivha nyanzvi mukutsvaga vanhu vakashaikwa, inofanirwa kuongorora nzufu mbiri dzinokanganisa zvinzvimbo zvepamusoro zvebato reNazi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Berlin Makore makumi matatu mushure mekudonha kwemadziro. Uye dzimwe nyaya kubva kuguta guru reGerman
Homeland yeFernando Aramburu